Mara ihe folda "faịlụ m niile" dị na Finder | Esi m mac
Mara ihe bụ folda ahụ “All My Files” nke Onye Chọta
Agobọchị gara aga, onye na-agụ peeji anyị mere ka anyị jụọ ajụjụ gbasara folda ahụ "Faịlụ m niile" que bụ ndabara na Finder sidebar. Na Soy de Mac, na mgbakwunye na ịkọwa, anyị nwere mmasị na ngalaba nkuzi dịka mmụta anyị si erute. Ya mere, ọ dị mma mgbe niile ịme ihe nkuzi gbasara obi abụọ nke onye na - agụ ya, ekwenyesiri m ike na ọ gaghị abụ naanị otu.
Ejiri folda "faịlụ m niile" nke mbụ maka Mac OS Sierra. Isi ọrụ ya bụ ịchọta faịlụ nke ụdị ọ bụla, n'oge na-adịbeghị anya kere ma nye iwu dị ka njirisi "ụbọchị mmeghe ikpeazụ"
Ihe anyị nwere n’azụ anyị bụ a nchekwa smart Chọta, nke ndabara site na sistemụ. Nke ahụ bụ ịsị, bụ folda na-echekwa onyonyo nke faịlụ ọ bụla ma nye ha iwu dịka oge ikpeazụ e mepụtara ma ọ bụ jiri ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara smart folda anyị nwere ike ịchọta ha na esote nkuzi.
Ọ dị mkpa iji mesie ya ike na ọ bụ ihe oyiyi, ọ bụghị mbiputegharị nke faịlụ ma yabụ, ịnwe ma ọ bụ na enweghị folda ahụ anaghị agbanwe oke nke ncheta anyị ma ọ bụrụ na ọ nwere, ọdịiche ya pere mpe.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị enweta faịlụ ahụ iji mee mgbanwe ọ bụla na ya, dịka: dezie ya ma mechie ya ọzọ, detuo ya site na folda smart gaa na folda sistemụ ọzọ ma ọ bụ hichapụ ya, A ga-eme ihe a n'otu ụzọ ahụ dị ka a ga - asị na anyị mere ya na folda mbụ ya. Yabụ, ọrụ nke smart nchekwa bụ ime ka ọ dịrị anyị mfe ịchọta a file, ma ọ bụrụ na anyị maara na ọ na-adịbeghị anya e kere ma ọ bụ gbanwetụrụ na, ya mere, ọ ga-abụ na elu nke nchekwa.
Ya mere, ọ bụ ngwá ọrụ na-azọpụta oge mgbe ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ faịlụ ụbọchị gị ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mara ihe bụ folda ahụ “All My Files” nke Onye Chọta
Daalụ, nke ọma kọwara ..
Enwetara m Mac Sierra 27 ″. Akwa. Esi m na Windows. Adịghị m mgbape, mana ana m agbachitere onwe m. O juru m anya nke ukwuu na ọ siri ike ịgbanwe mkpụrụedemede sistemụ. Emeela m okenye ma ọ bụ ezie na m na-eyi ugegbe kwesịrị ekwesị, anya m na-agwụ ike n'agbanyeghị oke nyocha ahụ. Achọrọ m maka ngụkọta na eziokwu, efuola m. M ga-enwe ekele nke ukwuu site na nhazi usoro iji dozie nsogbu a. Amaara m na ị nwere ike, ọkachasị nye otu igwe. Enweghị m ike ịhụ akwụkwọ nkọwa. Amaara m na e nwere mgbasa ozi na ụfọdụ akụkọ akụkọ Internetntanetị na isiokwu ahụ, mana enweghị m ike ịtụkwasị ya obi. Ndo maka iti ihe mana otu bụ okenye na ọ dị otu a.
Zaghachi Carlos Ribes Fabregat
Ndewo ndị mara mma !! Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na m hichapụ faịlụ ndị dị na folda "faịlụ m niile"? Ha na-apụ na folda ndị ọzọ?
azakwala m, enwetalarị m ya onwe m, ọ fọrọ nke nta ka m nwụọ n'ihi ụjọ! Ọ bụrụ na m hichapụ akwụkwọ na folda "faịlụ m niile", a na-ehichapụ ha na folda ndị ọzọ! 🙁
Abụ m nnukwu onye ofufe nke folda "faịlụ m niile", m na-eji ya kwa ụbọchị na-arụ ọrụ ma ọ na - eme ka ndụ m dị nfe me Mana mgbe m na - arụ ọrụ na MacBook Pro n'ụlọ m na - abanye nsogbu: kama Ọ bụ "na - adịbeghị anya "nke anaghị adị m mma n'anya, n'ihi na ọ na - egosi m ihe ole na ole ma enweghị m ike ịghọta njirisi ọ na - eji egosi m ụfọdụ ma ọ bụghị ndị ọzọ.
Nyaahụ achọtara m ihe gbasara iwughachi ederede Chakwasa ihie, Emere m ya na ọ ka mma ntakịrị ... mana enwere m obi abụọ, ọ bụrụ na ọ bụ njehie na onye na-achọ m ma ọ bụ mmelite High Sierra, ekwesịrị m ịkọwa ya na iMac n'ebe ọrụ m nwere Sierra.
Enwere m olileanya na mmadụ nwere ike inyere m aka.
Zaghachi Marlon Corado
Apple wepu ya "Ebido mkpọchi" ngwa ọrụ weebụ
Tim Cook na iwu mgbochi mbata nke Trump: "ọ bụghị amụma anyị na-akwado"